Montreal Chinatown Walking Tour
Ao anatin'ny Chinatown ao Montreal
Ny Chinatown ao Montreal dia mety ho maotina kokoa raha oharina amin'ireo tao Toronto sy Vancouver saingy tsy dia zava-dehibe loatra ho an'ny mponina izay miverina any amin'ny distrikan'ity mpizahatany mpizahantany ho an'ny fivarotam-pandraharahana manokana ity, ny toeram-pivarotana malaza, ny toetrany ao Sun Yat-Sen Kianja, ny mpizara tombony efa ela, ary mazava ho azy, ny sakafo.
Tsindrio ity sariohatra ity mba hijerena ny foiben'ny hopitaly ao Chinatown sy ny fivarotany, ny fiainana an-davanandro, ary ny toerana tsy maintsy misakafo.
Tanànan'i Chinatown any Montreal
Ny Chinatown any Montréal dia mendrika kely, distrika maotina manana endrika L iray misy sandoka eo anelanelan'ny Quartier des Spectacles sy Old Montreal . Feno fiaramanidina efatra miaraka amin'ny liona mitafy vato tsirairay eo amin'ny sisiny tsirairay dia manapaka ny sisin-taniny. Ny metro station d'Armes akaiky indrindra ao Chinatown no metro.
Sarimihetsika Sinatown any Montreal
Sary natolotr'i Le Mal Nécessaire © Mariel Rosenbluth
Raha jerena ny haben'ny faritra misy azy, dia tsy misy ny safidy atao amin'ny alina.
Le Mal Nécessaire no bikan'ny mponina ao amin'ny distrika (ary iray amin'ireo barany tokana, vanim-potoana), toerana iray mafana izay feno ankizy mahafinaritra, zavakanto, ary karazana hipster. Eritrereto ny zava-pisotro misy alikaola voanio sy voaniho.
Tsy niezaka mihitsy ve ny siramamy tamin'ny volombava dragona ? Tsy misy ahiahy. Tsy manana ny ankamaroan'ny olona. Fivalozana tranainy izay sarotra ny mahita tany ivelan'ny tanindrazany izay tratran'ny imperial an'i Shina izay saika maty noho ny Kominisma. Tany am-piandohan'ny '80 taona, siramamy siramamy siramamy kely siramamy no navela teto amin'izao tontolo izao.
Ary tamin'ny fiandohan'ny taompolo 90, ny iray tamin'izy ireo dia nanokatra ny toerany tao Chinatown ao Montreal, ny toerana voalohany any Amerika Avaratra dia mivarotra ny vatomamy volo.
Tandremo ny toerana misy an'i Johnny Chin ao afovoan'i Chinatown ao Montreal eo amin'ny Rue de la Gauchetière Ouest eo akaikin'ny zoron'ny Clark. Chin dia mamela azy ireo eo amin'ny toerana misy azy, miaraka amin'ny siramamy vita amin'ny tady vita amin'ny 8,192 vita amin'ny kofehy matevina noforonina nandritra ny segondra 40 segondra, ary nofonosina manodidina ny voanjo mainty, sôkôla, voanio ary voanio sesame, izay, rehefa nihinana fresh, dia mifangaro amin'ny Ny mofomamy "dragona dragona" melt-in-your-mouth dia mamorona kiraro, nogatiana tahaka ny vava sy ny tsirony.
Tsarovy ny fihinanana azy ireo ao anatin'ny ora. Na tsara kokoa, avy hatrany. Io no hany fomba ahafahana miaina alchemy kodiarana-candy-turns-to-nougat.
Hotels in Montreal Chinatown? Misy ny Holiday Inn, iray amin'ny tranokalan'ny ankamaroan'ny faritra raha toa ka ho an'ny pagoda ao an-tampony. Ary misy hotely safidy eo akaikin'ny foiben'ny fivoriambe ao Montreal Palais des congrès , ity farany dia manana mari-pahaizana mahavariana amin'ny zony manokana eo amin'ny sisiny andrefan'ny faritra.
Montreal Chinatown Goodies: Ny Bakeries
Ambony: Manaraka ny sifitra Shinoa ny Patisserie Harmonie Bakery, siramamy kely, ny sasany mamy. Sary natolotry ny Patisserie Harmonie Bakery
Bao buns, bakan-tsakafo Sinoa BBQ, mochi mofomamy, mofomamy volana, ary ny salady hafa rehetra izay vita avy amin'ny bakteria Sinema dia manamboatra ny sasany amin'ireo sakafo tsara indrindra azonao hanina.
Ao amin'ny Chinatown ao Montreal, ny roa tsara indrindra amin'ny fampisehoana dia Harmonie Bakery sy ny voankazo mena misy ranony feno ranomandry, sira sy mofo mamy vita amin'ny varimbazaha isan-karazany - kobam-boankazo, alika mafana, mofomamy, akoho, koveta BBQ - ary koa ny safidiny manan-danja ny mochi malemy.
Ary ny mpifanolo-bodirindrina aminy, Bao Bao Dim Sum, dia manao ny sasany amin'ireo mofo tsara indrindra ao an-tanàna. Andramo ny legioma bao sy ny holatra Sinoa ary ny biriky akoho.
Izy ireo dia ao amin'ny La Gauchetière Ouest any akaikin'ny zoron'ny St. Urbain ary tsy misy fanatanjahan-tena. Mandehana miantsinanana ao amin'ny La Gauchetière Ouest ary mipetraha ao amin'ny Sun Yat Sen Square ho an'ny toeram-pisakafoanana Chinatown na mankany atsinanana mankany amin'ny faritry ny zaridaina ao ambadiky ny Palais des congrès (raha tsy misy ny hetsika ho an'ny daholobe, dia hikorontana amin'ny mpanatrika ny fihaonana) .
Fanabeazana Chinatown any Montreal: The Noodles
Ambony: Nataon'ny trano nokolokoloina ary novolena tao amin'ny Nouilles Lao Tzu. Sary © Clint Lewis
Ho an'ny sakafom-bary vao haingana indrindra any Chinatown, andramo ny lavaka eo amin'ny rindrina izay Nouilles Lao Tzu eo amin'ny lakandranon'i Saint-Laurent atsimon'ny La Gauchetière Ouest.
Ny habaka dia kely ary tsy misy trano fandroana-manaraka ny varavarana Swatow Plaza raha te hiditra ao amin'ny efitra fandroana iraisam-pirenena raha tena mila mandeha ianao-saingy tsy manakana ny mponina sy ny mpandeha tsy hidina amin'ny tsiro, na hanamarina Ny mpiasa manamboatra ny poti-kazo eo am-baravarankely.
Tena goavam-be ny lasopy lasopy nataon'i Lao Tzu. Ary azo atao ny safidy vegaretiana.
Ny Masoandro Yat-Sen Square ao Chinatown
Ny Sun Yat-Sen Square dia ny ivon-kintan'i Montreal Chinatown, miala ny Palais des Congrès sy ny Complexe Desjardins ao Clark, eo an-joron'ny la Gauchetière Ouest.
Amin'ny andro mahafinaritra, mividiana sakafo mahasalama ary hihinana azy eny an-kianja.
Sary © Evelyn Reid, ireo zo rehetra voatokana, dia tsy azo ampiasaina raha tsy misy ny fahazoan-dàlana voasoratra
Ny fivarotana fivarotana Chinatown dia matetika no mihetsiketsika miaraka amin'ny mason-koditra, sary, sary hosodoko ary fitaovana fikarakarana zavakanto, trano fidiovana, fanilo, firavaka, tea, fitafiana, sakafo ary fitaovana.
Tsy fantatrao izay ho hitanao.
Zava-mahagaga mahavidy kokoa
Ny Chinatown any Montreal mora vidy dia ahitana ny La Maison VIP voalohany sy voalohany. Sakafo tsy manan-tsahala tsy dia mampino loatra ny lanjan'ny lantihy, tsy manana lamaody an-tariby izy ireo fa tsy manadio ny lakozia. Ho tombon-tsoa fanampiny, ny toeran'ny Chinatown malaza dia mivoha hatramin'ny 4 maraina alatsinainy hatramin'ny Sabotsy. Alahady alina ny mpiasa no manakatona ny varavarana amin'ny mamatonalina
Amin'ny faharoa faharoa amin'ny faran'ny tononkira kantonezy dia Tong Sing, misokatra isaky ny alahady hatramin'ny 4 maraina
Ary ny mpankafy pho dia tia an'i Pho Bang New York ao St. Laurent. Be dia be ny vilia baolina sy ny sakafom-bary. Hazo be dia be koa.
Fa raha betsaka loatra ny famolavolana, mandalo ny arabe sy ny loha mankany Pho Cali. Ny fahasamihafana tokana dia ny hatsarana dia tsy dia tsara loatra tahaka ny ao amin'ny Pho Bang New York. Mbola tsara ihany anefa izy ireo.
Ny fivoriana fanao isan-taona any Chinatown
Sary avy amin'ny mpampiasa Flickr Exile tao Ontario St (CC BY-SA 2.0)
Mankalaza ny Taom-baovao Shinoa ny Montreal Chinatown amin'ny Janoary sy Febroary miaraka amin'ny liona liona amin'ny alahady akaiky.
Amin'ny fahavaratra dia mifantina ny fandraharahana ny Hungry Ghost Festival mandritra ny volana fahafito amin'ny taona kalendrie Shinoa. Ny fanahin'ireo maty dia noheverina ho navotsotra avy any amin'ny helo tamin'io fotoana io, tsy misy fitsangatsanganana ny tany. Ny mpino dia mampifanaraka ireo fanahy miaraka amin'ny vola, sakafo ary fialam-boly.
Ary mazava ho azy, amin'ny lohataona, ny Bakery toy ny Patisserie Harmonie dia mankalaza ny fetiben'ny fankalazana ny fetin'ny Mid-Autumn miaraka amin'ny mena nentim-paharazana, mofomamy mamy misy ranom-boankazo feno taolam-boankazo sy lotus.
Saingy raha misy hetsika isan-taona izay manintona ny vahoaka, dia ny tsena iraisam-pirenena. Raha ny toeran'i Chinatown ao Montreal, dia mivarotra ambaratonga telo ny fahavaratra, telo faran'ny herinandro amin'ny volana Jona, Jolay, ary Aogositra.
Tranoben'ny alan'i Montreal: 2018 Winter Season
Ny Festival Festival Montreal Mondial des Cidres 2017
Snowshoeing Montreal 2018 Sezon: Montréal sy Raquettes
Tranombakoka Grant an'ny Zoologie sy ny Comparative Anatomy
Top 10 Toeram-ponenana any Vancouver
Top 5 Toerana tsara indrindra any Brooklyn mba hanolotra
Sary Disneyland Historical Photos
Fihaonan'ny Paris sy Frantsa isam-bolana amin'ny fikarakarana fiatoana
NY New Year's Eve Gay parties
7 Taorin'ny tolakandro dia nahita fomba fijery mahatalanjona tany Londres
Top 10 Travel and Travel Adventure Adventure